Famaizana an’ i Iran: misondrotra hatrany ny vidin-tsolika | NewsMada
Famaizana an’ i Iran: misondrotra hatrany ny vidin-tsolika
Miantraika any amin’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny fifandirana eo amin’i Iran sy i Etazonia. Misondrotra hatrany ny vidiny, raha ny tamin’ny alatsinainy teo, ka manahy ny mpandinika sy ny mpampiasa vola fa tsy ho ampy ny vokatra eo amin’ny tsena ary hitombo ny tinady.
Manodidina ny 77,69 dolara ny vidin’ny iray barila hozaraina amin’ny volana novambra ho avy izao, teo amin’ny tsenan-tsolika Brent, omaly alatsinainy 10 septambra tolakandro, ampiasain’ny tsenam-bola fifanakalozana ICE any Londres. Nihoatra 86 cents (100 cents = 1dolara) io vidiny io raha oharina ny tamin’ny zoma 7 septambra.
Lasa 68, 32 dolara kosa ny vidin’ny solika iray barila eo amin’ny tsenam-panakalozana any New York (Nymex), ho an’ny fifanaraham-barotra hatao ny volana oktobra 2018. Nitombo 57 cents io vidiny io raha oharina ny vidiny farany.
Tsy nanafatra intsony i Korea Atsimo
Mahatonga izao fiakaran’ny vidin-tsolika izao ny famaizana toekarena ataon’i Etazonia amin’i Iran. Antony, niala tsy hanohy ny adihevitra sy ny fifanarahana mikasika ny fandaharanasan’i Iran mikasika ny famokarana nokleary ny Amerikanina. Firenena mpamokatra solika fahatelo i Iran. Anisan’ny nanaraka ny hevitr’i Etazonia i Korea Atsim ka tsy nanafatra solika avy any Iran intsony, nanomboka ny volana aogositra teo.
Dikany, hiantraika amin’ny vidin-tsolika eto Madagasikara ity olana eo amin’ny Amerikanina sy ny Iranianina ity. Tsy nihetsika ny vidiny teto amintsika ny fiandohan’ny volana septambra teo, saingy azo antoka fa tsy maintsy hiova amin’ny volana oktobra io.